DEG DEG:- Si toos oo “LIVE” ah u daawo xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Si toos oo “LIVE” ah u daawo xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Waxaa haatan xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho si toos ah uga bilaabatay xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ammaanka goobta ay xafladda ka dhaceeyso ayaa ah mid si weyn loo adkeeyay, waxaana daqiiqadaha soo socdo la filayaa inay si toos ah u bilaabato khubbadaha ay jeedinayaan qaar ka mid ah madaxda xafladda lagu casuumay.
Warar hordhac ah ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay xafladda ay haatan soo gaareen goobta ay xafladdu ka dhaceeyso, waxaana waqtiyadda soo socoto la filayaa inay madaxda kale ee xafladda lagu casuumay ay soo gaaraan.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa goobta ay xafladda ka dhaceeyso ka jeedin doonna khudbadiisa caleemo saarka ah, taas oo uu kaga hadli doonno waxyaabaha uu qaban doonno mudadda 4-ta sano ee soo socoto.
Hadaba daqiiqad kasta la soco warbaahinta Bulshoweyn oo idiin ballan-qaadeysa, sida ay wax u dhacayaan inay idiin soo gudbin doonta.